လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Bahir Dar တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားဆက်စပ်နေသောအချက်များ - ကဏ္ study ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
comments: ကောလိပ်ကျောင်းအဲသယောပိကျောင်းသား 65% ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ပါ။
Reprod ကနျြးမာရေး။ 2014 ဒီဇင်ဘာ 6;11:84. doi: 10.1186/1742-4755-11-84.
Mulu W1, Yimer M က, Abera B ကို.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်အချို့အတွက်လိင်ကိစ္စရပ်များ၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသူတို့ကိုအားနည်းချက်ဟာသူတို့ရဲ့ကျိုးနွံသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသောအပြုအမူ။ အီသီယိုးပီးများတွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးမှာအမျိုးသားရေးရုပ်ပုံရှိသည်ဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် multicentered ကိုယ်စားလှယ်အချက်အလက်များ၏ရှားပါးမှုလည်းမရှိ။ ဒီလေ့လာမှုကထိုကွောငျ့ Bahir Dar တက္ကသိုလ်, အီသီယိုးပီးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အချက်များအကဲဖြတ်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကလက်ဝါးကားတိုင်အပိုင်းလေ့လာမှုဖေဖော်ဝါရီလ 2013 မှဒီဇင်ဘာလကနေ Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ Multistage နမူနာနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မေးခွန်းအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြိမ်ရေနှင့်ယုတ်အဖြစ်ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားသက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုပေးရန်စပ်လျဉ်းလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုပါခန့်မှန်း variable တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်≤ 0.2 တစ်ဦးကို p-တန်ဖိုးကိုခဲ့သောသူတို့ကို variable တွေကိုအဘို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 817 လေ့လာမှုသင်တန်းသားများ၏, 297 (36.4%) ကျောင်းသားများကိုအစဉ်အဆက်လိင်ခဲ့လေသည်။ ပထမဦးဆုံးအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်မှာယုတ်အသက်အရွယ် 18.6 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု, ငွေကိုတပ်လဲလှယ်မှုအတွက်စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်လိင်နှင့်အတူလိင်လိင်တက်ကြွကျောင်းသား 184 (62%), 126 (42.7%), 22 (7.4%) နှင့် 12 (4%) ကကျင့်သုံးခဲ့မျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်ရှိခြင်း အသီးသီး။ ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၏အချိုးအစားအသီးသီး 130 (15.8%) နှင့် 534 (65.4%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားဖြေဆိုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း (AOR = ၄.၈၊ CI = ၃.၄၉ - ၆.၅၄) နှင့်ညဘက်ကလပ်များသို့တက်ရောက်ခြင်း (AOR = 4.8, CI = 3.49 - 6.54) နှင့်သိသိသာသာကောင်းသောအပေါင်းအသင်းများရှိသည်။ လိင်ခဲ့ရပြီးအများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း, ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအကဲခတ်ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်း, khat ဝါးနဲ့မကြာခဏအရက်ကိုယူပြီးသိသိသာသာသည်အစဉ်အမြဲဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ခတ်ဝါးခြင်းသည် (AOR = ၈.၅၊ CI = ၁.၃၁ - ၅၅.၅) နှင့်ညဘက်ကလပ်များသို့တက်ရောက်ခြင်း (AOR = ၄.၆၊ CI = ၁.၈ - ၁၁.၇၇) တွင်ငွေကြေးနှင့်စီးပွားဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အသီးသီးလိင်လုပ်သားများ။
ကျောင်းသားသိသိသာသာအရေအတွက်ကကွဲပြားခြားနားသောအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့် porno ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကျင့်သုံးဘို့ခန့်မှန်းအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ကြိုတင်ကာကွယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များကိုထိထိရောက်ရောက်အစောပိုင်းကကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်, ကိုခိုင်ခံ့စေရပါမည်။
keywords: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, Associated အချက်များ, Bahir Dar
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်များအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာတွင်အတွက်အရေးပါသောကျန်းမာရေး, လူမှုရေးနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီး  ။ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များအများအပြားကျန်းမာရေးပြဿနာများမှအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့မကြာခဏ [ကွန်ဒုံး၏မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ကိုက်ညီမှုအသုံးပြုမှုရှိသည်ကြောင့်2] ။ ငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးလူ့ Immunodeficiency Virus ကို (HIV ပိုး) အပါအဝင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်နှစ်ဦးစလုံး၏အသက်ကြီးအတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်လူပျိုတို့ [, ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိစေခြင်းငှါ1, 2] ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေး, လူမှုရေး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံအဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရန်အသုံးပြုသူများအားဖျောထုတျ [2, 3].
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ [လူငယ်အသက်အရွယ်အမျိုးအစားဖြစ်ကြပြီးယင်းကဲ့သို့ HIV ပိုးအခြားအက်စ်တီအိုင်များနှင့်မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်မှဦးဆောင်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့နေကြ4-6] ။ အမျိုးသမီးလူငယ်များသည် [မလုံခြုံကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်, ပြင်းထန်သောနာမကျန်း, မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့များမှာ3, 7].
10-24 နှစ်ပေါင်းအသက်လူငယ်များ 1.8 ဘီလီယံကိုလှည့်ပတ်ဖွဲ့စည်းနှင့်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 27% ကိုယ်စားပြု  ။ လေ့လာရေး [အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသူတို့ကိုအားနည်းချက်, သူတို့လူငယ်အသက်အရွယ်အမျိုးအစား၌ရှိကြ၏သကဲ့သို့မိမိတို့၏ကျိုးနွံသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသောအပြုအမူမှတ်ချက်ပြု7, 8] ။ HIV / AIDS ရောဂါနှင့်အခြားမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်တူလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (RH အ) ပြဿနာများကို [ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များ၏သုခချမ်းသာဖို့အကြီးမြတ်ဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း7, 9].
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါအသစ်အဆန်းသန်း ၃၄၀ ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ရှိသူများတွင်တစ်နှစ်လျှင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ နှစ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက် ၂၀ တွင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောရောဂါသည် STI ကိုကုသသည်။ လေ့လာမှုများအရအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုအသစ်အားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်သည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိလူများတွင်ဖြစ်ပွားသည်။7, 10].
အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်, (15-24 အသက်) လူငယ်များ [လူဦးရေရဲ့ 35% အကြောင်းကိုပါဝင်သော, နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအုပ်စုများ၏တဦးတည်းကိုယ်စားပြု11] ။ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်ထိုလူငယ်လူဦးရေရဲ့သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်, အီသီယိုးပီးအမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများရှိခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာ၏အချို့လိင်, အသက်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, နှင့်နေထိုင်နေဖြင့်အားလုံးလူငယ် RH အ-related ကြားဝင်နှင့်မူဝါဒများပေးပို့ပါ၏ လူငယ်များ၏ချက်ချင်းရေရှည် RH အလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် Non-ကြည်ကြည်လိင်မှအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့အမြင့်အားနည်းချက်တုံ့ပြန်ရန်ယဉ်ကျေးမှုမိတ်ဖက်ခိုင်ခံ့စေ [7, 12] ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ၏အချို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိအမြင်ကိုလူငယ်ဖော်ရွေန်ဆောင်မှုများပေး, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်အသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာများနှင့် multtisectorial ညှိနှိုင်းတိုးချဲ့နေကြသည် [7, 12] ။ သို့သော်အများဆုံးဆက်စပ်ကြားဝင်ရလဒ်အဖြစ်အများပြည်သူပစ်မှတ်ထားကတိုက်ရိုက် [အပြုအမူများနှင့်ဇီဝဆေးဝါးကြားဝင်၏အမှန်တကယ်လွှမ်းခြုံအလွန်အမင်းနိမ့်အောင်, အဆင့်မြင့်ပညာရေးကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မျှော်လင့်ထားတုံ့ပြန်ကြပါဘူး13] ။ ထို့ကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ [နေဆဲသီယိုးပီးယားအတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်ပါသည်11].
ယခင်အီသီယိုးပီးယားတက္ကသိုလ်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအရလိင်ဆက်ဆံဖူးသူ ၂၆.၉% မှ ၃၄.၂% ရှိသည့်ကျောင်းသားများသည် ၄ င်းတို့အနက် ၄၅.၂% တွင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များနှင့် ၅၉.၄% သည်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ပထမလိင်မှုကိစ္စကျင့်စဉ်၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၁၇.၉ နှစ်ဖြစ်ပြီးပါဝင်သူများ၏ ၄.၄% သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်သားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြသည်။4, 14-16] ။ Inadditon, ကွဲပြားခြားနားသောပညာရှင်များလည်းကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ သူတွေထဲမှာ, အရက်နှင့်ဝါး khat ၏အသုံးပြုမှုကိုဘုံအချက်များဖြစ်ကြသည် [4, 17-19].
အီသီယိုးပီးအမျိုးသားအဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာ, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မူဝါဒများကိုသုံးပြီးလူငယ်အချို့များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်း၌တည်ရှိ၏သော်လည်း, ကပ်ရောဂါဆဲ၏အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ဘဝဟုဆိုကာအထူးသဖြင့်ပညာရေး setting ကိုအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက် နှစ်ဦးစလုံးချက်ချင်းနှင့်လာမည့်နှစ်များတွင်မြင့်မားသောလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအဲသယောပိလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ထိုမှတပါး, ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အပြုအမူ၏ Dynamic; ဒါဟာကျောင်းသားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနေရာဒေသ, ယဉ်ကျေးမှု, မြို့ပြနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏လူမှုယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေတွင်၏ interms ကွဲပြားယူဆနေသည်။ အထူးသ Bahir Dar တက္ကသိုလ်ခရီးသွားဧည့်, သက်သာပင်စင်လစာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်ခံရဖို့ကျောင်းသားများဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ထိုညဉ့်ကလပ်အသင်းမြင့်မားစီးဆင်းမှုလည်းမရှိရှိရာဒေသများတွင်တည်ရှိသည်။ သို့သော်အထက်ပါပြဿနာများနှင့်အတူနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြောငျးသားမြား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်လည်း Bahir Dar တက္ကသိုလ် students.Therefore ကြားတွင်ပေါင်းစုံပါအချက်အလက်များ၏နည်းပါးလည်းမရှိ, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည် Bahir Dar တက္ကသိုလ်, အီသီယိုးပီး၏ကျောင်းသားများအတွက်အကြား။
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှုဖေဖော်ဝါရီလ 2013 မှဒီဇင်ဘာလကနေ Bahir Dar တက္ကသိုလ် (BDU) တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ BDU [2000 ၌တည်နေတဲ့အများပြည်သူပိုမိုမြင့်မားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး20] ။ အဆိုပါတက္ကသိုလ် 567 ကီလိုမီတာအနောက်မြောက် Addis Ababa ၏ Bahir Dar မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ [နှစ်ဦးစလုံးဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်အဆင့်ဆင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဉ်များ၏ကျယ်ပြန့ကမ်းလှမ်း20] ။ BDU ယင်း၏ 35,000 ဘွဲ့ကြိုနှင့် 57 ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုပိုမိုထက် 39 ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, အီသီယိုးပီး၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်များအကြားယခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ထိုအချိန်က, က [အကြောင်းကို 20,000 အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုခဲ့သော Bahir Dar အတွက်လေးကျောင်းခွဲ (ပင်မကျောင်းဝင်း, Poly ကျောင်းဝင်း, Zenzelma နှင့် Yibab ကျောင်းဝင်း) ရှိပါတယ်20] ။ BDU ငါးခုကျောင်းသားဆေးခန်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကလူငယ်ဖော်ရွေန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ အရေးပေါ်တားဆေးနည်းလမ်းများနှင့်ကွန်ဒုံးမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ထောက်ပံ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်, အကြံပေးခြင်းများနှင့်နည်းလမ်းစီစဉ်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံပေးခြင်း, သက်တူရွယ်တူပညာရေးအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏မြှင့်တင်ရေး, မိသားစု၏ထိုအချိန်က လူငယ်ဖော်ရွေဝန်ဆောင်မှု၌တည်၏။ လောလောဆယ်အသီးအသီးဆေးခန်း [လူငယ်ဖော်ရွေန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လေ့ကျင့်သင်ကြားသုံးသူနာပြုများရှိပါတယ်20, 21].
လေ့လာမှုကာလအတွင်း Bahir Dar တက္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်ခြင်းအားလုံးသည်အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကို။
တစ်နှစ်ကနေငါ V ကိုလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်တစ်နှစ်အထိအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကို။
post-ဘွဲ့ရ, extension ကို, နွေရာသီ, ကြိုတင်မဲရပ်တည်မှုနှင့်အကွာအဝေးသင်ယူမှုကျောင်းသားများကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်းဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
နမူနာအရွယ်အစားနှင့်နမူနာ technique ကို
: P = 50% (များ၏မျှော်လင့်ထားအချိုးအစားအစဉ်အဆက်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ခဲ့), 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်နှင့် 5% ၏မဖြစ်စလောက်အမှား: အဆိုပါနမူနာအရွယ်အစားကိုအောက်ပါယူဆချက်စဉ်းစားတစ်ခုတည်းလူဦးရေအချိုးအစားပုံသေနည်းကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု 10, 2% Non-တုံ့ပြန်မှုနှုန်းနမူနာအရွယ်အစားခဲ့သည်ယူဆရင်: ဎ = 384 ×2+ 10% = 768 + 76.7 = 848 ။ နောက်ဆုံးနမူနာအရွယ်အစား 848 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သာ 817 BDU ကျောင်းသားများကိုလုံလောက်စွာမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။
Multistage နမူနာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်းအချက်အလက်များ၏ကိုယ်စားပြုမှုအာမခံရန်, နမူနာအရွယ်အစားအချိုးကျကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏အရေအတွက်အချိုးကျတစ်ဦးချင်းစီကောလိပ်မှခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောကျပန်းနမူနာ technique ကိုခုနစျပါးကောလိပ်များအတွက်လေ့လာမှု၏နှစ်စဉ်အနေဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာရွေးဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုစနစ်တကျကျပန်းနမူနာ technique ကိုသုံးပြီးရှေးခယျြခဲ့သညျ။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏ Variables ကို
မှီခို variable ကို
ထိုကဲ့သို့သောအစဉ်အဆက်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်, စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူငွေကြေးနှင့်လိင်များ၏လဲလှယ်မှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံ, လိင်, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သညျ။
လွတ်လပ်သော (ရှင်းလင်း) variable တွေကို
ထိုကဲ့သို့သောအသက်, လိင်, လေ့လာမှုနှစ်နေထိုင်ရာဘာသာရေး, ethncity, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်နေရာ, ရက်, khat ဝါးအဖြစ်လူမှု-လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကိုကြည့်။
Penile - လိင်အင်္ဂါတစ်ခုစီအတွင်းလိင်အင်္ဂါမှလိင်ဆက်ဆံခြင်း။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအီသီယိုးပီးလူဦးရေအချိုးအစားနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း (EDHS), အပြုအမူ Surveillance စစ်တမ်း (BSS) နှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်များမှမွေးစားခဲ့သည့်တစ်ဦးကစနစ်တကျနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာ [ဒေတာစုဆောင်းရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်22, 23] ။ အားလုံးမေးခွန်းကျောင်းသားဆေးခန်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီပြီးစီးခဲ့ကြသည်။
အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းထားဖို့, လေ့ကျင့်ရေးလေ့လာမှုနှင့်မေးခွန်းလွှာများ၏ content ၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရွေးဖို့ကိုဘယ်လိုအပေါ်ဒေတာစုဆောင်းနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှပေးထားခဲ့သည်။ စနစ်တကျနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာအမှန်တကယ်လေ့လာမှုပါဝင်သူရဲ့ထက်အခြားတက္ကသိုလ်ကနေ 85 ကျောင်းသားများကိုယူခြင်းအားဖြင့် Pre-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုကိုပြင်ဆင်နှင့်သင့်လျော်လွယ်ကူမှုအတွက်ခြဘာသာစကားအတွက်ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်။ အဆိုပါခြဗားရှင်းကိုထပ်အဓိပ္ပာယ်ကို၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုစစ်ဆေးသည်အင်္ဂလိပ်စာပြန်ထားသောခဲ့သည်။
အချက်အလက်များကို SPSS ဗားရှင်း ၂၀ ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာကြိမ်နှုန်းနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖော်ပြသောကိန်းဂဏန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာ variable များနှင့် ဆက်စပ်၍ လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ variable တွေကိုအများစုဟာ bivariate ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် value20 ၏ ap တန်ဖိုးကိုရှိခြင်းအားလုံး variable တွေကိုထပ်မံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သို့ဝင်ကြ၏။ ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှာတော့နောက်ပြန်ခြေလှမ်းပညာရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်နည်းစနစ်များတပ်ဆင်ထားနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် Multicolinearity ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် p တန်ဖိုး <0.2 ရှိခြင်း variable တွေကိုသိသိသာသာခန့်မှန်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ 0.05% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူရေနံစိမ်းနှင့်ချိန်ညှိအလေးသာအချိုးတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Hosmer နှင့် Lemshow ဥယျာဉ် -of- မထိုက်မတန်စမ်းသပ်မျိုးစုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်၏လျှောက်လွှာများအတွက်လိုအပ်သောယူဆချက်ပြည့်စုံခြင်းနှင့် p- တန်ဖိုးကို> 95 ကောင်းတစ် ဦး မထိုက်မတန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းရေး Bahir Dar တက္ကသိုလ်မှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ကော်မတီ, ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်ကနေရရှိခဲ့သညျ။ တစ်ဦးကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက် Bahir Dar University မှလုံခြုံခဲ့ပါတယ်နှင့်အသိပေးခွင့်ပြုချက်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ဖြေဆိုသူထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ ရလဒ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
817% ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်အတူ 96.7 အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးကစုစုပေါင်းလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ ဤအရာ, 545 (66.7%) အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်။ Tသူကဖြေဆိုသူများ၏အသက်အရွယ် 21 မှ 18 နှစ်ကနေအသက် 30 မှဆိုလိုသည်။ သူတို့ထဲကအများစုကို 618 (75.6%) 20-24 နှစ်အကြားရှိကြ၏။ ငါဎ ethncity, 466 (57.1%) အမ်ဟာရာနှင့် 147 (18%) ကနေခဲ့ကြသည် Oromo အဘိဓါန်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာတရားကိုမှလေးစားစွာသည်ဖြေဆိုသူ 624 (76.4%) သြသဒေါက်ခရစ်ယာန်နောက်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, 704 (86.4%) လက်မထပ်ရသေးခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုသင်တန်းသားများ၏ငါးရာတဆယ် (62.4%) နှစ်ကတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကျောင်းသားများကဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းက, ဖြေဆိုသူ 802 (98.2%) (ထိုကျောင်းဝင်းအဆောင်ထဲမှာစားပွဲတင်နထေိုငျ 1).
လူမှု-လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုအစဉ်အမြဲ 2013, Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်, မျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်များနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့
အစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ရှိခဲ့၏ခြုံငုံအချိုးအစား 297 (36.4%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအစဉ်အမြဲမျိုးစုံလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလိင်တက်ကြွကျောင်းသား 126 (42.7%) ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းအသီးသီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် 110 (48.5%) နှင့် 16 (23.5%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမှလေးစားစွာသည်လိင်တက်ကြွဖြေဆိုသူ 113 (38%) တသမတ်တည်းလိင်စဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအကဲခတ်ဖြေဆိုသူ 534 (65.4%) အတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံးအချိုးအစား 421 (77.2%) အထီး၌တွေ့ (ဇယား 1).
အဆိုပါလိင်တက်ကြွဖြေဆိုသူ 12 ၌တွေ့ငွေကိုတပ်လဲလှယ်မှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှု (4%) (ဇယား 2) ။ ပထမလိင်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်မှာပျမ်းမျှအသက်သည် ၁၈.၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုသူ ၇၂ (၂၄.၃%) သည်အသက် ၁၈ နှစ်မတိုင်မီတွင်လိင်မှုကိစ္စစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုပြုဖူးသူများအနက် ၁၇၄ (၅၈.၆%) သည်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်လိင်စတင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၃၃ (၁၁.၁%) သည်မူလတန်းကျောင်းများ၌ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည် (ဇယား) 3).
Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားငွေကိုတပ်လဲလှယ်မှုအတွက်ညဥ့်ကလပ်အသင်းများနှင့်လိင်မတက်ရောက်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလူမှု-လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကို, 2013
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းစပ်လျဉ်း Bahir Dar တက္ကသိုလ်, 2013 မှာကျောင်းသားများကို၏အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ
အစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးများနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်စပ်လျဉ်းအသီးသီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တသမတ်တည်းကွန်ဒုံးအသုံးမပြုသူဖြေဆိုသူအကြား, 67 (36.4%) ကွန်ဒုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလျော့ကျကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးဖက်နှင့်အတူမေတ္တာ၌အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု (စားပွဲတင်ဘို့အမျိုးသမီးတို့တွင်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးယောက်ျားတို့တွင်ဦးဆောင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်လျော့ကျစေပါတယ် 3) ။ ပို. အရေးကြီးသည်, အိမ်ထောင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်, 363 (69.8%) လိင်ဆက်ဆံခြင်းစတင်မအဓိကအကြောင်းပြချက်ကြီးနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များဇယားတွင်စာရင်းနေကြတယ် 3.
အစဉ်အဆက်စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ဖြေဆိုသူ 27 (7.4%) ကအစီရင်ခံထားပါတယ်ခဲ့သည်။ လိင်ကတက်ကြွစွာကျောင်းသားခြောက်ဆယ်လေး (21.5%) အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ , ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင် alchol သောက်သုံးခြင်းနှင့် khat ဝါး 73 (24.6%) အတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်, 102 (34.3%) နှင့် 51 (17.2%) အစဉ်အဆက်အသီးသီးလိင်ဆက်ဆံခဲ့သောသူတို့အားကျောင်းသား (ဇယား 3).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အသက်ကွာခြားမှုသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အသက် ၂၀ မှ ၂၄ နှစ် (AOR = ၉.၅၊ CI = ၃.၇၅ - ၂၃.၈၅) နှင့်> ၂၄ နှစ် (AOR = 20, CI = 24 - 9.5. 3.75) ရှိသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည် ၁၀ ကြိမ်နှင့် ၃.၆ ဆပိုများသည်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်အုပ်စုတွင်ဖြေကြားသူများသည်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ရှိကျောင်းသားများထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန် ၃ ဆပိုများသည် (AOR = 23.85, CI = ၁.၀၅ - ၈.၃၉) ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ လိင်ကွဲပြားမှုသည်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၊ ညဘက်ကလပ်များသို့တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ငွေလဲလှယ်ခြင်းအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသမိုင်းကြောင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အမျိုးသားဖြေဆိုသူများသည်အမျိုးသမီးဖြေဆိုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် ၄.၁ ကြိမ်ရှိပြီးဗီဒီယိုကြည့်သူများ (AOR = 24, CI = 3.65 - 1.7) ။ သို့သော်အမျိုးသမီးဖြေကြားသူအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကငွေလဲလှယ်ခြင်းအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန် ၃.၇ ကြိမ်နီးပါးရှိသည် (AOR = 7, CI = 8 - 10) (ဇယား) 4) ။ ထို့အပြင် ပို. အထီးအမျိုးသမီးထက်ညဥ့်ကလပ်အမှုထမ်းခဲ့ကြသည် (AOR = 2.3, CI = 1.25 -3.43) (စားပွဲတင် 5).
Bivariate နှင့်အစဉ်အဆက်နဲ့ဆက်စပ်အချက်များ၏ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်ရှိခြင်း, လိင်ခဲ့ခြင်းနှင့် Bahir Dar တက္ကသိုလ်, 2013 ၏ကျောင်းသားများအတွက်အကြားငွေကိုတပ်လဲလှယ်မှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှု
Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားစီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူညဥ့်ကလပ်အသင်းများနှင့်လိင်တက်ရောက်ခြင်း, ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကိုကြည့်နဲ့ဆက်စပ်အချက်များ၏ Bivariate နှင့် Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, 2013
အစဉ်အဆက်လိင်ခဲ့၏အချိုးအစားလေ့လာမှုနှင့်ဘာသာတရား၏တစ်နှစ်နေဖြင့်သိသိသာသာကွဲပြားကြဘူး။ အလားတူပင်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း (လိင်, ဘာသာရေးနှင့် ethncity အားဖြင့်သိသိသာသာစားပွဲတင်ကွဲပြားဘူး 4) ။ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၏အချိုးအစားအသက်, လိင်, နေအိမ်သို့, လေ့လာမှု၏တစ်နှစ်, ethncity, ဘာသာရေးနှင့်အခြားသောရှင်းလင်း variable တွေကိုအားဖြင့်သိသိသာသာကွဲပြားကြဘူး။
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်သူကိုကျောင်းသားများမဟုတ်တဲ့အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ခဲ့ဖို့ 1.8 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏ (AOR = 1.8, CI = 1.19 - 2.59) ။ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုမပြုခဲ့သောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့ဖို့အလားတူပင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်သူကိုဖြေဆိုသူ 2.8 ကြိမ်ခဲ့ကြသည်ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် (AOR = 2.8, CI = 1.12 - 6.9) ။ ညကလပ် ၀ န်ထမ်းများသည်လိင်အလေ့အကျင့်ကို ၇ ဆပိုများသည် (AOR = 7, CI = 7.4 -4.23) (ဇယား) 4) ။ အလားတူပင်ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းလည်းစီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင့်များအတွက်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်စပ်အချက် (AOR = 4.6, CI = 1.8- 11.77) (စားပွဲတင်ခဲ့သည် 5).
(AOR = 1.9, CI = 1.35 - 2.83) မှန်မှန်အရက်သောက်သုံးခြင်းကိုလည်းအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတစ်ခုဆက်စပ်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (ဇယား - မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း၏အချိုးအစားမဟုတ်တဲ့ drunkers (2.8 AOR = 1.4, CI = 5.6) ထက်တစ်ခါတစ်ရံအရက် drunkers အကြားတွင်ပိုပြီးခဲ့ကြသည် 4) ။ ညကလပ်များတွင်ပုံမှန်သောက်ခြင်း (AOR = ၉.၅၊ CI = ၅.၂ - ၁၇.၅) နှင့်ပုံမှန် (AOR = ၃.၃၊ CI = ၁.၁ - ၁၀.၁) သည်ပုံမှန်စာရင်းဇယားအရသိသာထင်ရှားသည်။ 5).
မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်မဟုတ်သော chewers (- 2.8 AOR = 2.8, CI = 1.4) ကိုနှိုင်းယှဉ် khat chewers အကြားတွင်လည်း 5.69 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့လေသည်။ (- 8.5 AOR = 1.31, CI = 55.5) (စားပွဲတင်ငွေလိင်ဆက်ဆံခြင်းပါဝငျအတွက် khat အလေ့အကျင့်လည်းသိသိသာသာဆက်စပ်အချက်ဝါး 4) ။ ထို့အပြင်ကျပ်ဝါးခြင်း (AOR = 1.98၊ CI = ၁.၀၈ မှ ၃.၆၄) နှင့်အရက်သောက်ခြင်း (AOR = ၄.၇၈၊ CI = ၃.၁၇-၇.၂၀) သည်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်အတွက်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များဖြစ်သည် (ဇယား) 5).
ဒီလေ့လာမှုမှာကျောင်းသား 36.4% အစဉ်အဆက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ် [နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု (34%) မှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါသည်24] ။ သို့သော်ဤအချိုးအစား [BSS-II ကို (9.9%) ၏တွေ့ရှိချက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့23] အခြားတက္ကသိုလ်များ (26.9%% 34.2 မှ), အီသီယိုးပီး၏လေ့လာမှုများ [4, 14-16] နှင့်အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်အတွက်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု (အထီးကျောင်းသားများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့် 5% များအတွက် 15%)  ။ ဆနျ့ကငျြ, ကအာဖရိကရှိအခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အစဉ်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအတွက်လိင်ခဲ့၏% 49 မှ 59% [တောင်အာဖရိကအစီရင်ခံခဲ့သည်26] နှင့်ယူဂန်ဒါ  ။ မတူညီတဲ့လေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ဆက်ဆံမှု၏အချိုးအစားအတွက်မညီမျှမှုတွေအတွက်တတ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်မြေပြင်, sociodemographic characterstics အဖြစ် HIV / AIDS ရောဂါဆီသို့ဦးတည်အသိပညာ, သဘောထားနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်ခြားနားချက်အတွက်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမလိင်မှုကိစ္စကျင့်စဉ်သည်မလိုလားအပ်သောကိုယ် ၀ န်နှင့် STIs ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိတွေ့စေသောအရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပထမလိင်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှု (၁၈.၆ နှစ်) ၏ပျမ်းမျှအသက်သည် EDHS (၁၈.၂ နှစ်) ၏အစီရင်ခံစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။22] အီသီယိုးပီးအခြားတက္ကသိုလ်များ [14-16] နှင့်မာဒါဂက်စကာ (၁၈.၄ နှစ်) ကျောင်းသားများ။26] ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှု၏ပျမ်းမျှအသက်သည် Jimma တက္ကသိုလ် (၁၇.၇ နှစ်) ၏တွေ့ရှိချက်များထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။4] နှင့် Gomo Gofa (၁၇ နှစ်)  ။ ထိုမှတပါး, လိင်တက်ကြွကျောင်းသားများကိုပိုမိုထက်ဝက်ကျော် (58.6%) အလယ်တန်းကျောင်းတွင်နေစဉ်အတွင်းပထမဦးဆုံးလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် 58.5% ကနေ 75.2% [အရွယ်ရှိအီသီယိုးပီးအခြားတက္ကသိုလ်များ၏လေ့လာမှုများနှင့်အတူညီ4, 14-16] ။ ဒါကအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုပပြproblemနာဟာတက္ကသိုလ်အဆင့်မှာသာမကအထက်တန်းကျောင်းနဲ့မူလတန်းအဆင့်တွေမှာပါပြthatနာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အလယ်တန်းကျောင်းသူ / သားများသည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုများဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။ မျိုးစုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်၏ရလဒ်အရလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံ၏အချိုးအစားတိုးမြှင့်အဖြစ်တိုးမြှင့်အဖြစ်အဘယ်မှာရှိလိင်အင်္ဂါလိင်အင်္ဂါလိင်မှု၏အစဉ်အဆက်တိုးမြှင့်အချိုးအစားတိုးလာသည်။ အသက် ၂၀ နှင့်အထက်ဖြေကြားသူများသည်အသက် ၂၀ ကျော်သူများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိကြောင်းအစီရင်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည် ၂၀၁၁ EDHS မှအစီရင်ခံချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။22].
အစဉ်အဆက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သူတို့တွင်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့၏အချိုးအစား 42.7% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူနှိုင်းယှဉ်တွေ့ရှိချက် [ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုမှာ Bahir Dar မွို့၌မှတ်ချက်ချခဲ့သည်29] နှင့် Gonder အတွက်  ။ သို့သော်မျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်မြင့်မားမှုနှုန်း [Wolaita တက္ကသိုလ်အစီရင်ခံခဲ့သည်31] ။ Haramaya အတွက်မတူဘဲတစ်လေ့လာမှု  နှင့် Jimma တက္ကသိုလ်  အစဉ်အဆက်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခဲ့၏အောက်ပိုင်းမှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါခြားနားချက်ကြောင့်နမူနာအရွယ်အစား, လေ့လာမှုလူဦးရေနှင့်ပြည့်စုံသောတက္ကသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးအတွက်ခြားနားချက်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာအစဉ်အဆက်လိင်ခဲ့ရပြီးအများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း၏ဖွယ်ရှိပါးပျဉ်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ, ထိုကဲ့သို့သောခတ်ဝါးအဖြစ်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျးအရက်မသောက်, ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့် porno ဗီဒီယိုကြည့်။ ဒါဟာ [လိုဗက်ကီးယားကနေလေ့လာမှုနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်32] နှင့်အီသီယိုးပီးအခြားတက္ကသိုလ်များ [4, 14-16] ။ ဤသည်တို့ကြောင့်အန္တရာယ်အမြင်စွမ်းရည်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းသားများကိုဆင်ခြင်တုံတရားတရားသဖြင့်စီရင်နိုင်စွမ်းမကျမည်အကြောင်းနှင့်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏လေးနက်သောအကျိုးဆက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါရလဒ်အဖြစ်အရက်နှင့် khat စားသုံးမှုနှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာအကာအကွယ်မဲ့လိင်ကိစ္စအလေ့အကျင့်၏ကြိမ်နှုန်း (62%) [Jimma တက္ကသိုလ်၌ပြစ်မှားမိလေ့လာမှု (57.6%) နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်4] နှင့်ကမ္ဘောဒီးယား၏အဆင့်မြင့်ပညာရေး  ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ Medawolabu တက္ကသိုလ် (40.4%), အီသီယိုးပီး [ထံမှလေ့လာမှုထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့34] ။ ထိုမှတပါး, တသမတ်တည်းလိင်တက်ကြွကျောင်းသားများအကြားကွန်ဒုံး (38%) ၏ကိုအသုံးများ၏အဆင့် [, အီသီယိုးပီးသည်အခြားလေ့လာမှုများထက်နိမ့်ခဲ့15, 29, 34] ၄၈% ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော - ၈၁% သည်ကွန်ဒုံးကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူ၊ တက်ကြွသောအပြုအမူ၊ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာဗဟုသုတကွဲပြားမှု၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြissuesနာများနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းစွမ်းရည်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီလေ့လာမှုအရ, လိင်တက်ကြွကျောင်းသား 7.4% စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါက [အီသီယိုးပီးအခြားတက္ကသိုလ်များ၏တွေ့ရှိချက်ထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ်4, 31, 34] စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်နှုန်း 13.9% 24.9 ဖို့% ရှိရာ။ ဤသည်ခြားနားချက်ကွဲပြားခြားနားသောတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများအကြားကူးစက်မှုများနှင့်စွန့်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ mode ကိုအကြောင်းကိုအသိပညာပေးအတွက်ခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ညဥ့်ကလပ်ကိုတကျရောကျစီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်များအတွက်သာအန္တရာယ်အချက်ပေမဲ့ Bahir Dar တက္ကသိုလ်ငှါညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းကနေကျောင်းသားတွေဟာကန့်သတ်ကြောင်းစည်းမျဉ်းယန္တရားကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုညဉ့်အချိန်ကာလအတွင်းကျောင်းဝင်းထဲကနေမရကျောင်းသားများကိုတားဆီး။
ဤလေ့လာမှု၌, ပိုက်ဆံ၏မျက်နှာကို ထောက်. လိင်ဖလှယ်၏ဖြစ်ပျက်မှု 4% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ [အီသီယိုးပီးတခြားတက္ကသိုလ်များ (4.4%) ၏စုပေါင်းအချိုးအစားနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါသည်4, 14, 15] ။ ဆနျ့ကငျြ, က [Bahir Dar မြို့မှာရှိတဲ့တခြားလေ့လာမှုထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ်35] မြီးကောင်ပေါက်အကြားလဲလှယ်လိင် 20.6% ရှိရာပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့် Addis Ababa  နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား [14.5% ခဲ့သည်37] ။ ပိုက်ဆံအဘို့လိင်ဖလှယ်သိသိသာသာအထီးထက်အမျိုးသမီးများတွင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းများစွာတွင်မိန်းမငယ်များသည်သူတို့ထက်အသက်ကြီးသောယောက်ျားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြသည်။ ဤအလေ့အကျင့်သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်အခြားရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ထိုရောဂါများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်လိင်တက်ကြွသောဖြေကြားသူများ၏ ၂၁.၅% သည်အသက်ကြီးသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ EDHS လေ့လာချက်အရအသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီး ၂၁% ကျော်သည်သူတို့ထက်ဆယ်နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး <၁% သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။22].
ဒီလေ့လာမှုမှာညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၏အချိုးအစား (65.4%) အီသီယိုးပီးအခြားတွေ့ရှိချက် (47.2%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်  ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် [Medawolabu (15.6%) မှာပြုမိလေ့လာမှုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့34] နှင့် Jimma တက္ကသိုလ်များ (32.4%)  ။ ယောက်ျားများနှင့်အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ဖြေကြားသူများအကြားတွေ့ရှိရသောအညိုရောင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုမှုအမြင့်ဆုံး ယင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုတည်ရှိမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာညဉ့်အခါကလပ်တက်ရောက်ခြင်း၏အချိုးအစား Bahir Dar မြို့ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်အတွက်လေ့လာမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်  နှင့် Jimma တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ  ။ အထီးဖြေဆိုသူအမျိုးသမီးထက်ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ရန် 2.2 ကြိမ်ရှိကြ၏။ ဤသည်ယောက်ျားနှင့်ဆက်စပ်မည်အကြောင်းတည်းရှိသောကြောင့်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမျိုးသမီးထက်ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ရန်ပိုပြီးလွတ်လပ်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်ခံစားရသည်။ တိုင်းရင်းသားကွာခြားချက်ကိုလည်းသိသိသာသာညဥ့်ကလပ် (စားပွဲတင်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် 5) ။ ဒါဟာဒေသခံလူထုများ၏တန်ဖိုးများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများခွဲယဉ်ကျေးမှုခြားနားချက်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆက်စပ်မည်အကြောင်းတည်း။
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကန့်အသတ်ရလဒ်ကို variable ကိုနှင့်အချို့သောရှင်းလင်း variable တွေကိုအကြားယာယီကြားဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြမပြုစေခြင်းငှါအရာလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု၏သဘောသဘာဝဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဟာသူအဆိုပါလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်လူမှုရေးလိုလားဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြလိမ့်မယ်ထားတဲ့လိင်နှင့်ဆက်စပ်သော်ထမ်းများနှင့်အထိခိုက်မခံကိစ္စရပ်များကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်သည်ဤန့်အသတ်နှင့်အတူအနက်ရပါမည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောနားလည်မှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်ဆက်ဆံထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းအသက်အရွယ်လိင်အဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, သိသိသာသာ Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလေ့ကျင့်နေကြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ညဥ့်ကလပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့် porno ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏တည်ရှိမှုအဘို့ခန့်မှန်းအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ကြိုတင်ကာကွယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များကိုထိထိရောက်ရောက်အစောပိုင်းကကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာနှစ်ဦးစလုံးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်, ကိုခိုင်ခံ့စေရပါမည်။
စာရေးဆရာ '' သတင်းအချက်အလက်
ဆေးပညာကောလိပ်နှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, ဆေးပညာအဏုဇီဝဗေဒအတွက် Bahir Dar တက္ကသိုလ်မှ WML လက်ထောက်ပါမောက္ခ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဏု၏ Bab တွဲဘက်ပါမောက္ခ, ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်မှာအဏုဇီဝဗေဒ, ရောဂါပြီးပညာနှင့်ကပ်ပါး၏ဌာနအကြီးအကဲ Bahir Dar တက္ကသိုလ်။ ဆေးပညာကောလိပ်နှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, ဆေးပညာကပ်ပါးအတွက် Bahir Dar တက္ကသိုလ်မှ MYM လက်ထောက်ပါမောက္ခ။
Bahir Dar တက္ကသိုလ်စီမံကိန်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုသည်။ , အသိအမှတ်ပြုရန်ကျေးဇူးတင် BDU HIV / AIDS ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှိနှိုင်းများအတွက်ရုံးကိုထိန်းချုပ်ကျနော်တို့စာရေးဆရာများ။ ကျနော်တို့က Mr အများကိန်းများ Kassaye, Bahir Dar တက္ကသိုလ်က HIV / AIDS ရောဂါရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ညီအစ်မမာသ Asmare, ညှိနှိုင်းရေးနှင့်ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်၎င်းတို့၏အလှူငွေများအတွက် Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိစ္စကျေးဇူးတင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကျောင်းသားများအကြှနျုပျတို့၏နှလုံးပါကျေးဇူးတင်စကားလွန်သွားလို။
WM ထင်သည်အထင်မှားနှင့်အချက်အလက်အစုအဝေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းစာစောင်များအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အပြီးသတ်, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ BA ဘွဲ့ထင်သည်အထင်မှားနှင့်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လေ့လာမှု, ပြင်းထန်စွာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ MY အဆိုပြုချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါဝင်ခဲ့, ပြင်းထန်စွာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ အားလုံးစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်ပါနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
Wondemagegn Mulu, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]_mednoW.
Mulat Yimer, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Bayeh Abera, Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
1 ။ Somba-MJ, Mbonile M က, Obure J ကို, Mahande MJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, တားဆေးအသိပညာနှင့် Muhimbili ၏အမျိုးသမီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြားကိုသုံးပါနှင့် Salaam တက္ကသိုလ်များ, တန်ဇန်းနီးယားဝံ့: တစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု။ BMC အမျိုးသမီးကနျြးမာရေး။ 2014; 14: 94 ။ Doi: 10.1186 / 1472-6874-14-94 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2 ။ Ambaw က F, Mossi တစ်ဦးက, Gobena တီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့် Jimma တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားကသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပုံစံ။ Ethiop J ကိုကနျြးမာရေးသိပ္ပံ။ 2010; 20 (1): 159-167 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ။ အီသီယိုးပီး၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသမ္မတနိုင်ငံ: ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး။ 2011 ။ စစ။ 1-149 ။
4 ။ Tura, G, Alemseged က F, Jimma တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား Dejene အက်စ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် predisposing အချက်များ။ Ethiop J ကိုကနျြးမာရေးသိပ္ပံ။ 2012; 22 (3): 170-180 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ: လူငယ်တွေများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုနျြးမာရေးအတှကျအရေးယူအရှိန်မြှင့်ဘို့တစ်ဦးကမူဘောင်။ ဂျီနီဗာ: WHO က; 2006 ။
6 ။ Lanre ဦး။ တောင်ပိုင်းအနောက်ဘက်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ Acad J ကိုဇီဝသိပ္ပံ။ 2009; 1 (1): 85-93 ။
7 ။ Shiferaw K ကို Frehiwot, G, Debremarkos မြို့မှာအလယ်တန်းနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းများ '' ကျောင်းသားများအကြားမိဘများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်ဆက်သွယ်ရေး Asres G. အအကဲဖြတ်, မြောက်အနောက်အီသီယိုးပီး။ Reprod ကနျြးမာရေး။ 2014; 11:2။ Doi: 10.1186 / 1742-4755-11-2 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
8 ။ Sime တစ်ဦးက, Nekemte မြို့အရှေ့ဘက် Wollega အတွက်ကျောင်းကမြီးကောင်ပေါက်အကြား Writu ဃအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်။ Ethiop J ကိုကနျြးမာရေး Dev မှ။ 2008; 22 (2): 167-173 ။
9 ။ Berhane က F, Berhane Y ကို, Fantahun အမ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအသုံးချပုံစံနှင့်ဦးစားပေး: မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ EthiopJ ကျန်းမာရေး Dev မှ။ 2005; 19 (1): 29-36 ။
10 ။ Hawassa မြို့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်မိဘ -adolescent ဆက်သွယ်ရေး Fikre အမ်အကဲဖြတ်။ 2009 ။ စ။ 42 ။
11 ။ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအေဂျင်စီ။ Path ကို Finder အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ အီသီယိုးပီးထဲမှာစကေးမှလူငယ်ဖော်ရွေန်ဆောင်မှုမြင်၏။ 2012 ။ စစ။ 1-8 ။
၁၂။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန။ အီသီယိုးပီးယား၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ။ အမျိုးသားမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာ 12 - 2006. 2015 ခုနှစ်စစ 2006-24 ။ ။
13 ။ Lamesgin အေ USAID က။ 2013 ။ HIV / AIDS နှင့်အီသီယိုးပီးများတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး: တစ်ဦးကမူဝါဒကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် frame အလုပ်; စစ။ 1-5 ။
14 ။ Shiferaw Y ကို, HIV နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်၏ Alemu တစ်ဦးက, Assefa တစ်ဦးက, Tesfaye B, Gibremdehin အီး, Amar အမ်အမြင်: စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကြားဝင်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ BMC Res မှတ်စုများ။ 2014; 7: 162 ။ Doi: 10.1186 / 1756-0500-7-162 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15 ။ Dingeta T က, Oljira L ကို, Alemayehu T က, Haramaya တက္ကသိုလ်, အီသီယိုးပီးမှာဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြား Akililu အေပထမဦးစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ။ Ethiop J ကို Reprod ကနျြးမာရေး။ 2011;5(1): 22-30 ။
16 ။ Berhan Y ကို, Hailu: D, အီသီယိုးပီးများတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြား Alano အေ sexual- အန္တရာယ်အပြုအမူများခန့်မှန်းခြင်းနှင့် HIV- ကြိုတင်ကာကွယ်အလေ့အထများ။ Afr J ကိုအေအိုင်ဒီအက်စ် Res ။ 2011; 10 (3): 225-234 ။ Doi: 10.2989 / 16085906.2011.626290 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17 ။ Lundberg P ကို, Rukando, G, Asheba S က, Thorson တစ်ဦးက, Allebeck P ကို, Ostergren P ကို, Cantor-Grae အီးညံ့ဖျင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2011; 11: 2-10 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-11-125 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18 ။ Gebreslassie M က, Feleke တစ်ဦးက, Melese တီ Psychoactive တ္ထုများကိုသုံးပါနှင့် Axum တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားဆက်စပ်အချက်များ, Axum မြို့, မြောက်အီသီယိုးပီး။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2013; 13: 2-9 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-13-693 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ Tilahun MM, Ayele GA ။ Gamo အဘိဓါန် Gofa အဘိဓါန်, အနောက်တောင်ပိုင်း, အီသီယိုးပီးများတွင်လူငယ်အချို့အကြားအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များ။ သိပ္ပံ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2013; 1 (2): 62-68 ။ Doi: 10.11648 / j.sjph.20130102.20 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
20 ။ BahirDar တက္ကသိုလ်ပြန်သတင်းအချက်အလက်မြေ။ မှာရရှိနိုင် http://www.bdu.edu.et/background ဇူလိုင်လ 10, 2013 အပေါ်
21 ။ Tewabe T က, Destaw B, Admassu M က, Bahir Dar တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအကြားမိမိဆန္ဒအလျောက်အကြံပေးခြင်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလွှာမှတစ်ဦးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များ၏ Abera ခအကဲဖြတ်။ Ethiop J ကိုကနျြးမာရေး dev ။ 2012; 26 (1): 17-21 ။
22 ။ CSA နှင့် ORC Macro ။ အီသီယိုးပီးလူဦးရေအချိုးအစားနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း 2005 ၏အစီရင်ခံစာ။ Addis Ababa, အီသီယိုးပီးနှင့် Calverton, မေရီလန်းပြည်နယ်, အမေရိကန်: ဗဟိုစာရင်းအင်းအာဏာပိုင်နှင့် ORC Macro; 2006 ။
23 ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ။ အီသီယိုးပီး၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ: HIV / AIDS ရောဂါအပြုအမူ Surveillance စစ်တမ်း (BSS) 2002 ။ စစ။ 1-123 ။
24 ။ GB ကိုလောတ L ကို, Huang က B, Daniyam, CA, Zink TM, Succop PA ဆိုပြီးပါးရိုက်။ နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားအပိုင်းစစ်တမ်းကိုဖြတ်ကျော်။ BMJ ။ 2003; 326: 15 ။ Doi: 10.1136 / bmj.326.7379.15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25 ။ ဂူ, အိန္ဒိယ၏လက်မထပ်ရသေးကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား Sujay R. အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ကနျြးမာရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆန်းသစ်တီထွင်မှု Fellowship programmer အလုပ်လုပ်စက္ကူ။ 2009 ။
26 ။ Rahamefy အို Rivard M က, ဒါဂတ်စကာထဲမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြား Ravaoarinoro အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ HIV / AIDS ရောဂါ၏ JSoc ရှုထောင့်။ 2008; 5: 28-34 ။ Doi: 10.1080 / 17290376.2008.9724899 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
27 ။ Agardh တစ်ဦးက, Emmelin M က, Muriisa R ကို, Ostergren P. Glob ကနျြးမာရေးလှုပ်ရှားမှု။ 2010 ။ လူမှုအရင်းအနှီးနှင့်ယူဂန်ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Tilahun T က, Gamo အဘိဓါန် Gofa အဘိဓါန်, အနောက်တောင်ဘက်အီသီယိုးပီးအတွက်လူငယ်များအကြားပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်မှာအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ် Ayele G. အအချက်များ: တစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2013; 13: 2-6 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-13-2 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
29 ။ Anteneh ZA ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Bahir Dar မြို့, အနောက်မြောက်သီယိုးပီးယားတွင်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏ဆက်စပ်မှု။ သိပ္ပံ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2013; 1 (1): 9-17 ။ Doi: 10.11648 / j.sjph.20130101.12 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
30 ။ Shiferaw Y ကို, Alemu တစ်ဦးက, Girma တစ်ဦးက, Getahun တစ်ဦးက, Kassa တစ်ဦးက, Gashaw တစ်ဦးက, Alemu တစ်ဦးက, Teklu T က, အသိပညာ၏ Gelaw ခအကဲဖြတ်, Gondar မြို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းသားများအကြား HIV / AIDS ရောဂါနှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmit ရောဂါကူးစက်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ မြောက်အနောက်အီသီယိုးပီး။ BMC Res မှတ်စုများ။ 2011; 4: 3-8 ။ Doi: 10.1186 / 1756-0500-4-3 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
31 ။ Gelibo T က, Belachew T က, Wolaita Sodo တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, တောင်အီသီယိုးပီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence ၏ Tilahun တီခန့်မှန်း။ Reprod ကနျြးမာရေး။ 2013; 10: 2-6 ။ Doi: 10.1186 / 1742-4755-10-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
32 ။ Ondrej K ကို Andrea MG, Pavol ဂျေစိတ်ဓာတ်နှင့်စလိုဗကျကျောင်းသားများကိုအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူအချက်များ။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2009; 9: 15 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-9-15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
33 ။ Siyan Y ကို, Krishna ဟိန္ဒူက CP, အန္တရာယ်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအတွက်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အကာအကွယ်အချက်များ၏ Junko Y. အခန်းက္ပ။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2010; 10: 477 ။ Doi: 10.1186 / 1471-2458-10-477 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34 ။ Setegn TM, Takele လေး, Dida NB, Tulu BE ။ တစ်ဦးကလက်ဝါးကားတိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု for: အန္တရာယ်များ Madawalabu တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြား / HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုအရှေ့တောင်အီသီယိုးပီးထိုင်တော်မူ၏။ Reprod ကနျြးမာရေး။ 2013; 10: 2-7 ။ Doi: 10.1186 / 1742-4755-10-2 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35 ။ Alamirew Z ကို, Awoke W က, Fikadie, G, Shimekaw ခပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့် BahirDar မြို့, အနောက်မြောက်သီယိုးပီးယားတွင်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားငွေလိင် (ဆုကြေးဇူးကို) ဖလှယ်၏ဆက်စပ်မှု။ Clin Medi Res ။ 2013;2(6): 126-134 ။ Doi: 10.11648 / j.cmr.20130206.13 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
36 ။ Regassa N ကို, အီသီယိုးပီးအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ကျောင်းသားများအတွက်အကြား HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအပေါ် Kedir အက်စ်သဘောထားနှင့်အလေ့အကျင့်။ Addis Ababa တက္ကသိုလ်၏ဖြစ်ရပ်။ edu Res ။ 2011;2(2): 828-840 ။ [PubMed]
37 ။ Amsale ကို C, Yemane ခရွယ်တူချင်းဖိအား Addis Ababa, အီသီယိုးပီးကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ချုပ်ကားမောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို AIDS ရောဂါ။ 2012; 2: 159-164 ။ Doi: 10.4236 / wja.2012.23021 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]